Saturday June 17, 2017 - 06:42:09 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Dawladda Somalia oo uu hogaanka u hayo Madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo aan ka mid ahayn Urur Diimeedyadda ka jira Somalia ayaa markii ugu horaysay waxaa la dareemayaa in Xafiisyadda Maamulka ay awood ku yeelanayaan Xubno ka
Xafiiska Madaxwaynaha ayaa dhawaan waxaa loo magacaabay Agaasime Guud oo laga dhigay Fahad Yaasiin oo ka tirsan Urur Diimeedka Akhwaanul Muslimiin ee ay taageerto Qadar. Waxaana Ku Xigeen looga dhigay Cabdirisaaq Shoole oo la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay Urur Diimeedka Saaciduun Bil Xaq ee ay wal walka ka muujiyeen Culumadda Soomaaliyeed oo isna ay taageerto Dawladda Qadar.
Haddaba waa Kuma Fahad Yaasiin
Fahad Yaasiin Waa Wariye ka tirsanaa Telefeshinka Aljazeera. waxaana uu xiriir dhaw la leeyahay Dawladda Qatar oo la aaminsan yahay inuu u qaabilsan yahay Arrimaha Somalia. Waxaana Fahad Awoodiisa Siyaasadeed ay soo ifbaxday markii uu door ku yeeshay Doorashadii 2012 ee uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo la aaminsan yahay inuu ahaa Shaqsigii fududeeyay Dhaqaalaha Doorashadda ay ku galeen Xisbiga Damuljadiid, laakiin markii la doortay Xasan Sheekh ayeey kala boodeen Fahad oo isku diyaarinayay inuu Dawladda daaha gadaashiisa ka maamulo.
Fahad waxa uu mar kale soo muuqday 2016-kii markii la isku diyaarinayay Doorashadda Madaxtinimadda Somalia oo uu taageerayay Madaxwaynaha hadda taladda haya Maxamad Cabdulaahi Farmaajo oo uu xooggaa dhaqaale ah uga keenay Dawladaha Qadar iyo Iiraan oo ka caraysan Go'áankii uu Xasan Sheekh xiriirka ugu jaray Iiraan.
Fahad waxa uu sidoo kale marar dhawr ah Dhaqaale si qarsoodi ah u soo gaarsiiyay Ururka Alshabaab oo ay taageerto Dawladda Qatar. Waxaana uu Fahad sidoo kale sabab u ahaa in Hogaamiyihii Ururkii Argagixisadda ee Xisbul Islaam, Cumar Iimaan Abuubakar, iyo Maxamad Siciid Atam oo ka tirsanaa Alshabaab ay Magan galyo siiso Dawladda Qatar, isagoo sidoo kale gar wadeen ka ahaa Qorshe ay Dawladda Qatar ku doonaysay in Sheekh Xasan Daahir Aways isna la dajiyo Qatar, taasoo ay diiday Dawladda Somalia.
Fahad waxay Xogta Waagacusub heshay muujinaysaa inuu la shaqeeyo Sirdoonka Qatar. Waxaana uu yahay Il Wareed ay Macluumaadka Somalia ka qaataan, una dirsadaan Hawlaha ay ka rabaan Alshabaab. haddana waxa uu ku darsaday Dawladda Somalia oo isagu hadda uu si dadban u maamulo.
Dad badan ayaa aaminay in Siyaasiga Fahad uu taageero uu noqonayo Madaxwayne. laakiin Dadka Siyaasadda u dhuun duleela waxay aaminsan yihiin in Fahad uu yahay Dulaal Dawladda Qatar ee uusan saamayn ku lahayn Siyaasadda Somalia. Waxayna Xeel Dheerayaashu ku doodayaan in Fahad uu sabab u noqon doono Fashilka Farmaajo oo haddaba ka tuuray haadaan markii uu ku qasbay inuu taageero Qatar, dhabarkana xejiyo Imaaraadka iyo Sucuudiga oo Xiriir Ganacsi la leh Somalia, taageerana siinayay Dawladihii isaga dambeeyay Somalia.
Waa Kuma Cabdirisaaq Shoole
Cabdirisaaq Maxamuud Shoole Waa Agaasime Ku Xigeenka Madaxtooyadda Somalia waxa uu horay Maamule uga soo noqday Markaz Daarul Culuum oo ay ka soo baxeen inta badan Dhalinyaradda Alshabaab. Waxaana uu Markazkaasi ahaa goob lagu tababaro Xagjiriinta oo ay maalgaliso Dawladda Qatar. kadib waxa uu Cabdirisaaq ka mid noqday Xubno ku dhawaaqay Ururka Saaciduun Bil Xaq oo isna ay maalgalinayso Qatar.
Shoole waxa uu gacan saar la leeyahay Ururka Alshabaab oo ah Koox Argagixiso ah oo ka dagaalanta Geeska Afrika. Waxaana hadda ka soo muuqashadiisa Madaxtooyadda Somalia ay walaac galisay Sirdoonka Reer Galbeedka oo shaki ka muujinaya sida loola wadaagi karo Macluumaad Dawlad ay Xafiisyadeedii ugu sareeyay ka arrimayaan Shaqsiyaad gacan saar la leh Alshabaab.
Dawladda Somalia oo la filayay kadib doorashadii Madaxwayne Farmaajo inay noqon doonto Dawlad aysan ku baraxnayn Urur Diimeedyo ayaa hadda Rajadaasi meesha ka baxday. Waxaana ay la mid noqotay Dawladihii ka horeeyay oo ay maamulayeen Urur Diimeedyadda Aala Sheekh iyo Damul Jadiid.
W.Q:- Cismad Caynte
Topnews:- Urur diimeedkii maalgeliyay Farmaajo oo markii ugu horeeysay shaaciyay iney gaalo yihiin dadka aaminsan Dastuur
Urur diimeedkii Maalgeliyay Madaxweyne Farmaajo xilligii doorashadiisa ayaa markii ugu horeeysay banaanka u soo baxay. Urur diimeedkaan oo Somalia looga yaqaan Tagfiir ayaa 40 sano ka shaqeeynaayey sideey lacag badan u tacban lahaayeen iyagoo la wareegay guud ahaan goobaha Waxbarashadda dalka. Agaasime ku xigeenka Madaxtooyadda Somalia Cabdirisaq Shoole ayaa ka mida Urur diimeedkaan oo qorshahoodu yahay iney taladda kala wareegaan Farmaajo. Full Article
[DHAGEYSO:]Dowladda Ethiopia oo Jamaaludiin Mustafa u magacaawday safiirka Ethiopia ee Somalia?
[DHAGEYSO:]Xogtii ugu Dambeysay Magacaabista Golaha Wasiirada Cusub ee Somalia?
[DHAGEYSO:]Madaxweyne Farmaajo oo si rasmi ah ula Wareegay Villa Somalia?
[DAAWO:]Dowladda Mareykanka oo Albaabada Ka Xirtay 7 Dal oo Ay Ku Jirto Somalia??
[DAAWO:]Ethiopia oo si Adag uga Hortimid in Beelaha Daarood iyo Abgaal loo Doorto Madaxweynaha Somalia?
alrunta Full Article
[TOP NEWS:Guddoomiye Jawaari] oo oo Seeftiisa la soo baxay Go'aano deg deg +Xasan Sh oo Villa Soomaaliya Xamaan Urursanaya
Gudoomye Jawaari oo niyada ku haya dhibaatada dalka iyo waxa laga filayo,ayaa Weerar Culus ku qaaday SHirkii Madasha Wadatashiga qaran ee Habeen hore dhexmaray Madaxda Maamul goboleedada dalka,wuxuuna gaashaanka ku dhuftay oogu horaynba in uu ka qayb galo Shirkaas. Full Article
[Daawo] wiil uu dhalay fanaan caana oo hees ku garbaashay Musharaxiinta ay shisheeyaha iyo urur diimeedyadda wataan
Yaa koraa kursigaan , its selection but its not election. Full Article
[Daawo] Ururka doqomadda Somalia oo sharuudo yaab badan ku xiray in lagu biiro
'Waa is aruursannay, war maxaan qaadannaa: Ururka Sawirrada Ummadda Soomaaliyeed baan qaadannay.' - Waa Xasan Cilmi, Gudoomiyaha Ururka Dabbaallada. 'We met and decided to take the title: The Organisation of the 'Stupid' People of Somalia.' Xasan Cilmi, Leader of the 'Stupid' Group. Full Article